Rubric: mutemo wemutemo
Mutongo werufu kuChina. Mhosva dzipi dzakatongerwa?
Mutongo werufu muChina mutongo werufu. Izvo chete zvikamu zenyika ino umo chirango chakadai chisina kupihwa isiri Hong Kong neMacau, iyo iri munzvimbo yakakosha nekuda kwezviitiko ...
Maitiro ekuwana tsigiro yemwana pasina kurambana
Pane zviitiko zvinowanzoitika apo murume haana hanya nevana zvachose, anoshandisa mubhadharo wose pane zvake zvinodiwa, uye asingapi mukadzi wake rubatsiro rwemari. Kazhinji izvi zvinotungamira pakurambana, uye mukadzi anoshandira ...
Masisitimu ejeri muRussia
Iyo penitentiary system ndiyo yekubatanidza matanho akasiyana siyana anotorwa muzvivakwa zvekugadzirisa nechinangwa chekudzidzisa vasungwa. Zvakare pasi peiyi tsananguro inonzwisiswa iyo mamiriro ehurumende anotarisira kuurayiwa kwematare. Sangano rekutanga, mu ...
Zvigadzirwa zvinokanganisa: pfungwa, mhando, basa
Mukutsvaga kwehupenyu hwoumbozha, vazhinji vakagadzirira kutyora mutsara wemutemo, vachishandisa mhedzisiro yemabasa evamwe vanhu mahara. Saka, zvigadzirwa zvekunyepedzera zviri kuwedzera kuoneka pamasherufu nhasi. Kurwira kwakawedzerwa kuri kurwiswa dambudziko iri ...
Mhando dzeKodzero dzevanhu uye Kusunungurwa
Munhu nehurumende vagara vari vese zvakaringana macomputer. Nekuti yaive kuburikidza nebasa revanhu iyo system yezvematongerwo enyika yakaonekwa mune ino nyika. Vashoma vanhu vanoziva kuti chimiro ichi chinongori chemagariro. ...
Notary iri ... Notary muRussian Federation. Notary Law
Chiitiko chevanhu chinogara chichiwana maitiro echikamu icho chinogadzirwa. Naizvozvo, nhasi kune huwandu hukuru hwemaindasitiri akasiyana apo mumwe nemumwe wedu anogona kushandisa kwedu ruzivo uye hunyanzvi ..
General mutemo weChirungu. Source dzeChirungu Mutemo
Munhu munhu weruzhinji. Ndokunge, inogona kuvapo chete mukati mehunhu hwemagariro. Pasina kutaurirana, munhu anogona kungofa. Uyezve, kudyidzana kwevanhu nhasi kuri kure nekugara ...
Kutorerwa kodzero - zvekuita? Kubvisirwa rezinesi rekutyaira. Kudhira rezinesi kwetemu
Kana vakanyimwa kodzero, chii chekuita? Kune vakawanda vagari vemumaguta, kutyaira mota dzadzo kwakareba hakuchisiri fashoni, asi chave chinhu chakakosha kuita kuti zvive nyore kurarama. Ehe, pamberi pemotokari zvakanyanya ...
Nzira dzekutakura dziri ... Kugadziriswa uye mhando dzemotokari
Nzira dzekutakura - idzi zvishandiso zvinoshandiswa kutakura zvinhu kana nhumbi dzinoiswa pairi, kana vanhu, mumigwagwa. Iyi tsananguro inopa kunzwisisa kwakazara kweTS. Nekudaro, mukudzidzira, kazhinji ...
Chinyorwa 196 yeiyo Civil Code yeRussian Federation. Yakazara nguva yekudzika
Nhasi, kusabhadhara kwemakwereti uye zvikwereti idambudziko rakanyanya renharaunda yedu. Kupererwa nebasa, kuderedzwa kwemubairo, kurwara - zvese izvi zvinogona kutungamisa kunonoka mumabhadharo ekumanikidza. Nekuda kweizvozvo - ...
Chii chinonzi colony? Nyika dzinoti makoloni uye zvazvinoreva nhasi izwi rekuti "kugadzirisa makoloni"
Chii chinonzi colony, vazhinji vedu tinorangarira kubva kune zvidzidzo zve nhoroondo. Iyo koloni inzvimbo inotsamira, iyo iri pasi pesimba reimwe nyika yekumwe (metropolis). Zvisinei, hazvinga ...
Kutenga Manager Profession Zvimiro
Iyo maneja wekutengesa inoita basa rakakura mukugadzirwa kwekugadzira kana mune imwe nzvimbo yebhizinesi. Munguva pfupi yapfuura, kudiwa kwehunyanzvi hwedanho iri kwawedzera. Zvinoenderana nebasa rinoitwa ...
Art. 210 yeCriminal Code nemazita
Iyo Criminal Code yeRussia inotsanangudza mutoro wekusikwa kwenzvimbo dzakapara mhosva (masangano) yekutumwa kwezviitwa zvisiri pamutemo (imwe kana inoverengeka) yeguva kana kunyanya degree degree. Iyo inodzorwa neArt. 210 yeCriminal Code. Funga ...
Ndezvipi zvinhu zvinofungwa nehurumende yemuno muRussian Federation? Chii chinonzi hurumende yemuno?
Domestic mutemo muRussia Federation inoitwa pamatanho maviri. Inoitwa nemitumbi yenyika uye dzemunozvitonga. Padanho rechipiri, masisitimu ekutonga akakosha emisangano anoumbwa. Nyika uye hurumende yemunharaunda zvakasiyana maererano nechiremera, ...
Mutemo wekupara mhosva. Mamiriro ezvinhu eutsotsi
Muhupenyu mune zviitiko apo maitiro echimwe chinhu, kunze kunodonha mukati mechikamu chemhosva uye, mumamiriro ezvinhu akajairika, kunosanganisira mhosva yemhosva, anoita sekushandira munharaunda. Mune imwe nharaunda, kusaita kana kuita ...
Pedestrian: kuchengetedzwa kwemakumbo munzira
Isu tese tiri vafambi, kureva vashandisi vemigwagwa yakazara. Kana munhu aenda kunoshanya, kushanda, kuchikoro, mune zvese izvi zviitiko anofamba, uye nekudaro, kuitira ...
Chakavanzika uye nyanzvi chakavanzika
Kuitwa kwenzvimbo chero ipi zvayo uye nhengo dzayo kunoenderana nehuwandu hukuru hwezvinhu. Chekutanga pane zvese, zvakafanira kucherechedza kukosha kwemutemo. Hongu, nekuda kweiyo chaiyo yakatarwa regadziriso yehukama hwevanhu, zviitiko zvemapazi mazhinji uye masevhisi ...
Chii chinonzi art. 31 Code yeCriminal Procedure?
Art. 31 Code yeCriminal Procedure (yazvino shanduro) inogadza kutonga munhau dzemhosva. Kazhinji zvinogadziriswa nziyo dzinoenderana nemafambiro evamwe zviremera. Nyaya yekumhan'arira zvigadzirwa zvematsotsi kune kugona kweimwe ...
Maitiro ekuita fungidziro yebasa rekuvaka? Wedzero yemuno yebasa rekuvaka. Urongwa
Kuvandudza dhizaini uye kufungidzira zvinyorwa chinhu chakakosha uye chakakosha kwazvo basa rekuvaka zvivakwa zvevanhu kana maindasitiri, kuvakazve zvivakwa, kuwandisa kwavo kana kuenderera mberi kwekugadziridza kwekushongedza. Kugadzira fungidziro yebasa rekuvaka, tora ...
Mitemo yekuwana EU pasipoti
Vanhu vazhinji vakatarisana nekushanya kazhinji kuenda kuEurope, ingave bhizinesi kana kufamba, vari kufunga nezve vhiza-yemahara yekufamba kuenda kuSchengen nyika. Nhasi, vagari vazhinji vemunyika dzakadai se ...
peji 1 peji 2 ... peji 141 Next Page
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,756 masekondi.